माहामारी नियन्त्रणकाे दाैडः केपि ओली VS जर्मनी चान्सलर VS क्यानडाका ट्रुडाे - DURBAR TIMES
HomeOpinionमाहामारी नियन्त्रणकाे दाैडः केपि ओली VS जर्मनी चान्सलर VS क्यानडाका ट्रुडाे
माहामारी नियन्त्रणकाे दाैडः केपि ओली VS जर्मनी चान्सलर VS क्यानडाका ट्रुडाे
समकालीन विश्वमा काेहीपनि नेता चर्चाकाे शिखरमा रहन चाहन्छन् , चाहे आफ्ना कामबाट हाेस या विवादित वक्तव्यबाजीबाट। यो सत्यताबाट हामी नेपालीहरुबीच हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली ज्यूको छबी पनि अमेरिकन राष्ट्रपति जस्तै आलाेचित बनेकाे छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प अक्सर उन्को विवादित बोलिका कारण सामाजिक सन्जालमा आलाेचकहरूकाे चरम शिकार बन्छन अनि नेपालका हाम्रा ओली विवादित वक्तव्यका कारण आलाेचित भैरहेका छन्। ओलीलाई राम , बेसारपानी, हाच्छिउँ गरी कोरोना भगाउने, अध्यादेश, गैंडाज आर गैंडाज नट राइनोज , सिलिन्डर युगको अन्त्य, काठमाडौंमा अब धुलो रहेन जस्ता विषयगत तथ्यभन्दा बाहिरका वक्तव्यले धेरै पटक आत्थु आत्थु पार्यो। उनी धेरै कुरामा असफल पनि रहे। ओम्नी काण्ड , विष्णु पौडेल काण्ड , बास्कोटा काण्ड, अध्यादेश काण्ड, अक्सर अली काण्डमा उन्को असफलताले जनमानसबीच निरासा जगाउँदै गयो। आफ्नै पार्टी अनि सरकारको बेकामे फण्डाका कारणले सरकारकाे सकारात्मक अनि सराहनीय कार्यहरु पनि ओझेलमा परे। तरपनि जनमानसले के बुझ्न जरुरत छ भने ओलीकाे सरकार विश्व भर चलिरहेको महामारीको मामलामा भने विश्वभर सफल भनेर प्रशंसामा परेकि जर्मनीकि चान्स्लर एनजीला मर्केल, अनी क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडेउ भन्दा सफल देखिएको छ।
तथ्यांकहरु हेर्दा नेपालको जनसन्ख्या तीन करोड आसपास छ , क्यानडाको तीन करोड सत्तरी लाख आसपास।त्यस्तै जर्मनीको जनसंख्या आठ करोढ चालिस लाख आसपास रहेकाे छ । कोरोना महामारीको सन्दर्भमा भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सरकार सफल देखिन्छ। कूल जनसंख्याको मृत्यु दर हेर्दा नेपालमा प्रती दश लाख व्यक्तिमा चार जनाकाे मृत्यु भएकाे छ ।त्यस्तै जर्मनीमा प्रती दशलाख १११ र क्यानाडामा २४० जना प्रति दशलाख मृत्युदर रहेकाे छ। हालसम्म नेपालमा ३०४८६ सन्क्रमित छन, जर्मनीमा २३१,२८४ र क्यानाडामा १२३,८७३ संक्रमित छन। जनसंख्याको हिसाब लगाउँदा पनि दुनियाँभरका शक्तिशाली राष्ट्रभन्दा नेपाल उत्कृष्ट देखिन्छ। चाहेर या नचाहेर पनि यसको श्रेय प्रधानमन्त्री ओलीकाे सरकारलाई जान्छ। नेपालमा आज सम्म प्रकाशित नतिजा अनुरुप १३७ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ । क्रमशः जर्मनीमा ९,३२४ तथा क्यानाडामा ९,०५४ जनाकाे कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाे छ।
जनताहरुको भनाइ याे रहेकाे छ कि, सहि तरिकाको प्लान गरेर सरकार चलाइएकाे थियाे भने यो सरकार उत्कृष्ट हुन्थ्यो। सरकार देखी नकारात्मक भावना भनेकाे RDT परीक्षण देखि विभिन्न आसेपासेका भरण पोषणमा लाग्यो भन्ने हो। खुल्ला आँखाले पनि सरकार केही कुरामा चुकेको भने देखिन्छ। सफल भनिएका राष्ट्रहरु भन्दा ओली तथ्याङ्कका आधारमा माथि देखिन्छन्। अबका दिनमा सरकारका आसेपासेहरू भन्दा विज्ञहरू साथमा लिएर हिँडे सरकार गाली गलौचबाट बच्न सक्ला।
तर के अबका दिनमा पनि सरकार यो तथ्याङ्कलाई सम्मानित तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्ला त? के अब हाम्रो समस्त आर्थिक स्थितिलाई उठाउन सक्ला त ?
Previous article(FACT CHECK) काेराेना खाेपबाट रूसी राष्ट्रपतिकि छाेरीकाे मृत्यु ?
Next articleरामेछापमा निषेधाज्ञा जारीः थप प्रहरी परिचालन
सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा सुरु
असोज ६ गतेदेखि नयाँ आइपीओ आउँदै, कति दिने आवेदन?